Health Archives | Kingdom of news
လေဟာပြင်မှာ နှာခေါင်းစည်းမတက်ရင် ကိုဗစ် ကူးစက်နိုင်ခြေ ဘယ်လောက် ရှိနိုင်မလဲ?
Spicy ခေါက်ဆွဲ စားသူများ၊ မာလာရှမ်းကော နှင့် အချဉ်အစပ် စားသူများ သတိထားကြပါ။
အသက်ရှုလိုက်တာနဲ့ ကိုဗစ် ရှိ မရှိ နှစ်စက္ကန့်အတွင်း အဖြေထုတ်ပေးတဲ့စက် တီထွင်အောင်မြင်ပြီ
Unicode အသက်ရှုလိုက်တာနဲ့ ကိုဗစ် ရှိ မရှိ နှစ်စက္ကန့်အတွင်း အဖြေထုတ်ပေးတဲ့စက် တီထွင်အောင်မြင်ပြီ စက်ထဲကို ပါးစပ် သို့ နှာခေါင်းမှ အသက်ရှု လေမှုတ်သွင်းယုံဖြင့် ကိုဗစ်ပိုးရှိ၊ မရှိစစ်ဆေးနိုင်သော စက်တမျိုးကို အစ္စရေးနိုင်ငံက တီထွင်အောင်မြင်ထားတယ် လို့ဆိုပါတယ်။...
ဆီးချိုဘယ်နေရမှန်း မသိအောင်ဖြစ်သွားတဲ့ ကြက်သံပုရာပေါင်း အခုတလော အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကြက်သံပုရာပေါင်း အကြောင်းကို မဖတ်ရသေးတဲ့သူများအတွက် ကျန်းမာရေးသတင်းများစာမျက်နှာမှ ပြန်လည်ရေးသားမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှ အသက် ၅၅ နှစ်ရှိ လူတစ်ယောက်ဟာ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဆရာဝန်ကြီးပေးတဲ့ ဆီးချိုရောဂါဆေးကို သောက်နေတာ...
မြန်မာပြည် ကိုဗစ်တတိယလှိုင်း နှင့် စတင် ဝင်ရောက်လာနိုင်သည့် အဓိက နေရာများ
Unicode မြန်မာပြည် ကိုဗစ်တတိယလှိုင်း နှင့် စတင် ဝင်ရောက်လာနိုင်သည့် အဓိက နေရာများ မြန်မာပြည်ဟာ ပထမလှိုင်းကို အေးဆေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယလှိုင်းဟာ အနောက်ဖက်က လုံခြုံရေးညံ့ဖျင်းမှု၊ ထောက်လှမ်းရေး ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် ကျိုးပေါက်မှုကြောင့် ကြီးမားခဲ့ပြီး တိုင်းပြည်အနာဂတ် ရွေးကောက်ပွဲကြောင့်...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် ဗီဇပြောင်း ပိုးသစ် မတွေ့ရှိသေးကြောင်း ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးပြောပြီ
Unicode လက်ရှိအချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကူးစက်မြန် ကိုဗစ်-၁၉ ဗီဇပြောင်းပိုးသစ် မတွေ့ရှိသေးကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ၊ ဗဟိုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးက လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် ရေးသားထားသည်။ “ကိုဗစ်မျိုးစိတ်ကွဲ ဧရာဝတီစင်တာတွင် စတင်တွေ့ရှိ” ဆိုသည့် သတင်းမှား...
လူတိုင်း ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးကို ဘာကြောင့် ထိုးသင့်တာလဲ
Unicode Pfizer က ထုတ်တဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအပြင် အခုဆိုရင် Oxford ကထုတ်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးကိုပါ ယူကေနိုင်ငံမှာ အသုံးပြုခွင့်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာလည်း ကာကွယ်ဆေးတွေကို စတင်ထိုးနေကြပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း မကြာခင်မှာ ကာကွယ်ရလာတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကောင်းတွေ ရှိနေပါတယ်။...
တစ်ခုခုစားတိုင်း နံနံပင်မထည့်နဲ့ ပူစီနံမထည့်နဲ့ ပင်စိမ်းမထည့်နဲ့ ဆိုတဲ့သူတွေ ဒီစာလေးဖတ်ကြည့်ပါ
တစ်ခုခုစားတိုင်း နံနံပင်မထည့်နဲ့ ပူစီနံမထည့်နဲ့ ပင်စိမ်းမထည့်နဲ့ ဆိုတဲ့သူတွေ ဒီစာလေးဖတ်ကြည့်ပါ မင်္ဂလာပါ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ယခုတစ်ခါမှာတော့ အစားအစာတွေမှာ ဟင်းခာတ်အမွှေးအကြိုင်အဖြစ် အမြဲလိုလိုတွဲပါတတ်တဲ့ နံနံပင် ပင်စိမ်း ပူစီနံတို့ရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ နံနံပင် ပင်စိမ်း ပူစီနံသုံးမျိုးလုံး...
မြန်မာဝယ်မယ့် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး အိန္ဒိယမှာ သုံးဖို့ အတည်ပြုပြီ
Unicode အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်နဲ့ အက်စထရာဇန်နကာ ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အသုံးပြုဖို့ အိန္ဒိယက အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ဒုတိယ အများဆုံးနိုင်ငံကြီးအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်း စတင်နိုင်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီဆေးကို အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်း ထုတ်လုပ်ဖို့ သဘောတူထားတဲ့...
ဝတဲ့သူ၊ ဗိုက်ခေါက်ထွက်သူ၊ အဆီကျချင်သူများအတွက်
zawgyi ဝတဲ့သူ ဗိုက္ပူတဲ့သူေတြ အတြက္ ဗိုက္က်ေစမည့္ ရွားေစာင္းလက္ပတ္ယို လုပ္နည္း… ဝတဲ့သူေတြ ဒါမွမဟုတ္ ဗိုက္ပူတဲ့သူေတြအတြက္ အရမ္းအဆင္ေျပတယ္။ အိမ္ရွင္မ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ဒုကၡက ဗိုက္ပူတာပါပဲ။ ကဲနည္းလမ္းေလးကို ၾကည့္ရေအာင္ ရွားေစာင္းလက္ပတ္ ငါးတက္ေလာက္ကို ေဘးက...
မြန်မာလဆန်းရက်မှာ ရှောက်ရွက်ကိုစားပေးသင့်တဲ့အကြောင်းအရင်း .
မြန်မာလဆန်းရက်မှာ ရှောက်ရွက်ကိုစားထားရင် အဲဒီတစ်လလုံးလေမဖြတ်တော့ဘူးလို့ ရှေးရိုးစကားရှိပါတယ်။ရှောက်ရွက်ကိုကြက်သွန်ဖြူ၊ငြုပ်ကောင်းတို့နဲ့ဟင်းခါးချက်ပြီးအမြဲတမ်းသောက်ပေးရင် လေငန်းရောဂါပျောက်ပါတယ်။ ဒါတင်ပဲလား? မဟုတ်ပါဘူး၊ကမ္ဘာပေါ်မှာအဖြစ်များပြီး၊အပျောက်နည်းတဲ့ ကင်ဆာရောဂါကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်၊ ရှောက်ရွက်ဟာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ မကြီးထွားနိုင်အောင်ကူညီပေးပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို ၃/၄ ကြိမ်စားသုံးပေးရုံနဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ရှောက်ရွက်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချနိုင်တဲ့ Astsiri အဆီဓာတ်တစ်မျိုးပါဝင်ပြီး...
ဆေးလိပ်သောက်တက်ရင် မဖြစ်မနေ ဒီအစားအစာ (၆)မျိုးစားပေးပါ
ဆေးလိပ်သောက်ရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်မယ်၊ အထူးသဖြင့် အဆုတ်ကျန်းမာရေးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက်စေမယ်ဆိုတာကိုတော့ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်လည်း သိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မကောင်းမှန်းသိလျက်နဲ့ကို မဖြတ်နိုင်ကြတာပါ။ မရှောင်နိုင်ရင်၊ မကာကွယ်နိုင်ရင်တော့ ကုသရပါမယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ကျနော်တို့ အနေနဲ့ စားရင်းသောက်ရင်းနဲ့ပဲ အဆုတ်ကို ပြန်လည်သန့်စင်...